दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ २५ गते बुधवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर ११ - Sutra TV Sutra TV
मेष : आज तपाईंले धेरै खिचलो र फरक विचारहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जसले तपाईंले रिस उठ्ने र अप्ठ्यारो गर्नेछ। ढिलो भएका भुक्तानी प्राप्त भएकोले पैसाको समस्यामा सुधार भएको छ। तपाईंमध्ये कसैले गहना वा घरको उपकरण खरिद गर्ने सम्भावना छ। तपाईंले आफ्नी प्रियतमालाई भेटेपछि रोमान्सले तपाईंको मन ढाक्नेछ। आफ्नो कामको दक्षतामा वृद्धि गर्न नयाँ प्रविधीमा बानी बसाल्नुहोस्, तपाईंको शैली र राम्ररी काम गर्ने अद्वितीय तरीकाले तपाईंलाई छेउबाट हेर्दै गरेका मानिसहरूलाई चासोको विषय हुनेछ। तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, सबै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बोक्नुभएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। आफ्नो जोडीले तपाईंलाई केही नराम्रा कुराहरूका साथै तपाईंको किशोर समयको याद दिलाउने छन्।
मिथुन : तपाईंहरू कसैलाई आज महत्वपूर्ण निर्णय लिन बाध्य हुनु पर्ने हुन सक्छ जसले गर्दा परेशान र त्रसित हुन सक्नु हुन्छ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईंको तनाउ कम गर्नेछ। तपाईं पनि भागेदार हुनुहोस र मूक दर्शक जस्तो भएर नबस्नुहोस्। रोमान्सको लागि धेरै राम्रो दिन होइन किनकि तपाईंले साँचो प्रेम पाउन सक्नु हुनेछैन। कठिन चरण पछि, आज तपाईंको काममा केहि राम्रो कुरा हुनाले आश्चर्य हुनेछ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। नियमित रूपमा आफ्नो जीवनसाथीलाई चकित गराउनुहोस्, अन्यथा उसले महत्वहीन महसुस गर्न सुरु गर्न सक्छ।
मिथुन : तपाईंहरू कसैलाई आज महत्वपूर्ण निर्णय लिन बाध्य हुनु पर्ने हुन सक्छ जसले गर्दा परेशान र त्रसित हुन सक्नु हुन्छ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईंको तनाउ कम गर्नेछ। तपाईं पनि भागेदार हुनुहोस र मूक दर्शक जस्तो भएर नबस्नुहोस्। रोमान्सको लागि धेरै राम्रो दिन होइन किनकि तपाईंले साँचो प्रेम पाउन सक्नु हुनेछैन। कठिन चरण पछि, आज तपाईंको काममा केहि राम्रो कुरा हुनाले आश्चर्य हुनेछ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। नियमित रूपमा आफ्नो जीवनसाथीलाई चकित गराउनुहोस्स अन्यथा उसले महत्वहीन महसुस गर्न सुरु गर्न सक्छ।
कर्कट : आज आफ्नो उँचो विश्वासलाई सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। व्यस्त दिन भए तापनि तपाईँले अझै पनि आफ्नो ऊर्जा फर्काएर ल्याउन सक्षम हुनुहुनेछ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। आवश्यक परेमा मित्रहरूले तपाईंको सहायता गर्नेछन्। तपाईंको प्रेम नयाँ उचाइमा पुग्नेछ। आजको दिन आफ्नो प्रेमको मुस्कानबाट सुरु हुनेछ, र एक(अर्काको सपनामा अन्त हुनेछ। अचानक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुनाले वा धनको वर्षा हुनाले व्यवसायीहरूको लागि राम्रो दिन हो। आज तपाईंको बातचीतको पक्ष बलियो हुनेछ। तपाईंको आजको दिन आफ्ना जीवनसाथीसँग प्रेम, चुम्बन, अंकमाल, र मजा गरेर रोमान्समा बित्नेछ।
सिंह : आफ्नो ऊर्जा प्राप्त गर्न पूर्ण आराम गर्नुहोस्। व्यस्त र तनाउपूर्ण यात्रा गर्नुहोस्, तर आर्थिक फाइदा भने होस्। तपाईंको आकर्षक प्रकृति र सुखद व्यक्तित्वले तपाईंलाई नयाँ मित्र बनाउन र सम्पर्क सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। आज प्रेम नभएको महसुस हुन सक्छ। तपाईंको विश्वास बढ्दैछ र उन्नति स्पष्ट छ। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। तपाईंको यो एउटा रमाइलो रोमान्टिक दिन हुन सक्छ, तर केही स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छन्।
कन्या : तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। छोराछोरीका चासाको चिन्ता गर्नु आवश्यक हुनेछ। तपाईंको साहसले प्रेमलाई जीत्नेछ। तपाईं काममा गल्ती स्वीकार गर्नेहरू तपाईंको पक्षमा जानेछन्। तर तपाईंले यसलाई कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। तपाईंले जसलाई हानि पुर्‍याउनुभएको छ त्योसँग माफी माग्नुपर्छ। सबैको गल्ती हुन्छ तर मूर्खले मात्रै तिनीहरूलाई बारम्बार दोहोर्याउँछ भन्ने जान्नुहोस्। कुनै तर्कमा परेर कठोर टिप्पणी दिनबाट बच्नुहोस्। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीको मायाम जीवनका सबै कठिनाइहरू बिर्सिनु हुनेछ।
तुला : साँझ साथीहरूसँग सुखद समय बिताउनुहुनेछ तर अत्यधिक खाने र कडा पेयबाट होशियार रहनुहोस्। वित्तमा निश्चित बढोत्तरी हुनेछ, तर त्यही समयमा व्ययमा पनि वृद्धि हुनेछ। बाँकी रहेको घरेलू कामले तपाईंको केही समय लिनेछ। रोमान्टिक अमूर्तताले तपाईंको आनन्दमा मसला थप्नेछ। आफ्नो काम र आफ्नो प्राथमिकतामा ध्यान दिनुहोस्। आज यात्रा, मनोरञ्जन र सामाजिक क्रियाकलाप तपाईंको एजेन्डामा हुनेछ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसित आफ्नो जीवनको सबैभन्दा राम्रो समय बिताउनु हुनेछ।
वृश्चिक : आफ्नो स्वास्थ्यको बेवास्ता नगर्नुहोस्, विशेष रक्सीबाट जोगिनुहोस्। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले मित्रहरूबाट सहयोग पाउनुहुनेछ, तर सावधानीसँग बोल्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो प्रियको काखमा सान्त्वना पाउनुहुनेछ। तपाईंका नक्षत्रहरूले आज तपाईंलाई असाधारण शक्ति दिनेछन्, त्यसैले लामो समयसम्म लाभ दिने महत्त्वपूर्ण र निर्णायक निर्णय लिनुहोस्। घरमा संस्कार, हवन, शुभ समारोह गरिनेछ। तपाईंलाई पाएर तपाईंको जोडी आफैंलाई भाग्यमानी मान्छ जस्तो लाग्छ। आज यस क्षणको राम्रो उपयोग गर्नुहोस्।
धनु : बाहिरी खेलहरूले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछन्, ध्यान र योग लाभदायक हुनेछन्। आर्थिक सुधार निश्चित छ। टाढाका आफन्तले आज तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछन्। तपाईंले के के गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो प्रेमीसँग भन्नुभयो भने गम्भीर समस्या हुनेछ। कार्यस्थलमा वरिष्ठ साथै सहयोगिहरुबाट समर्थन प्राप्त हुनाले तपाईंको हौसला बढ्नेछ। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। एउटा विनोदी छलफलमा पुरानो मुद्दा उठ्न सक्छ र यसले तपाईं दुई बीच तर्क उत्पन्न गर्दछ।
मकर : तपाईंको मन हालका घटनाहरूले विचलित गर्नेछन्। ध्यान र योग आध्यात्मिक साथै भौतिक लाभको लागि लाभदायी साबित हुनेछन्। आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। तपाईंको साथीहरूसँग राम्ररी समय कट्नेछ तर सवारी चलाउँदा धेरै होशियार हुनुहोस्। आफ्नो प्रेमीलाई मन नपर्ने लुगा नलगाउनुहोस् किनकि यसले उनको चित्त दुखाउनेछ। अझै पनि कामको खिचलोले तपाईंको मन बेह्रेको छ र परिवार र साथीहरूको लागि कुनै पनि समय निस्किन सकेको छैन। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। आज, तपाईं र तपाईंको जोडी बीचको झगडामा कुनै सुन्दर स्मृतिको कारण विराम आउन सक्छ। त्यसैले, गरम तर्कको समयमा पुरानो सुन्दर दिनको सम्झना गर्न नबिर्सिनुहोस्।
कुम्भ : व्यस्त समय भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। ठूलो योजना र विचारहरू भएको कसैसँग तपाईँको आकर्षण हुनेछ, कुनै पनि निवेश गर्नुअघि व्यक्तिको विश्वसनीयता र प्रामाणिकता प्रमाणित गर्नुहोस्। घरको श्रृंगार बाहेक बच्चाहरुको आवश्यकता पनि हेर्नुहोस्। व्यवस्थित भए तापनि छोराछोरी बिनाको घर प्राणहीन हुन्छ। बच्चाहरुले घरमा इनाम र आनन्द थप्दछन्। तपाईंको प्रेम सम्बन्ध आज राम्रो हुने छैन। आज काममा तपाईंको सफलताको दिन हुनेछ । यात्रा र शैक्षिक गतिविधिहरूले तपाईंको जागरूकतामा बृद्धि गर्नेछ। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनको कुरा आफ्नो नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ।
मीन : तपाईंको धैर्यलाई लगातार प्रयासको साधारण अर्थमा र समझसँग राख्नुहोस् जसले तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी रहनेछ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। अरूको मामिलामा तपाईंको संलग्नता आज रोक्नुपर्छ। कार्डमा कसैले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। आफ्ना क्यारियर सम्बन्धित निर्णयहरू आफैं गर्नुहोस् र तपाईंलाई लाभ हुनेछ। तपाईंले अप्रत्याशित स्रोतबाट महत्त्वपूर्ण निमन्त्रणा प्राप्त गर्नु हुनेछ। आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंको यो जीवनको सबैभन्दा राम्रो पूर्वसन्ध्या हुन सक्छ।